Kianja Barea Mahamasina: nijery ny fizotry ny asa ny filoha Rajoelina | NewsMada
Kianja Barea Mahamasina: nijery ny fizotry ny asa ny filoha Rajoelina
Mizotra araka ny niheverana azy, ny asa fanamboarana ny kianjaben’ny Mahamasina. Ho tratra araka ny fe-potoana nifanarahana, ny fananganana ireo, “tribunes”. Nijery ifotony, izany ny filoham-pirenena sy ny Ben’ny tanànan’Antananarivo.
Nidina nijery ifotony ny fanamboarana ny Kianja Barea etsy Mahamasina, omaly, ny filoha Rajoelina Andry. Tetikasa, tafiditra ao anatin’ireo velirano natao hampiroboroboana ny tanora sy ny fanatanjahan-tena. Mizotra araka ny tokony ho izy ny asa etsy Mahamasina. Nanamarika ireo tomponandraikitry ny orinasa sinoa China State Construction Overseas Development (CSCOD), misahana ny fanatanterahana ny asa, fa voahaja araka ny tokony ho izy ny fe-potoana nifanarahana, ny hahavitana ireo tribune mialoha ny fankalazana ny fetim-pirenena, sy ny fankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantena. Raha tsiahivina, asa voalohany natao ny fanamboarana ny tribune, haka endrika Ravinala, ary hisy toerana 16 000 eo ho eo. Marihina fa hisy seza miisa 40 880 ao amin’ny kianja vaovao etsy Mahamasina ka anisan’ny omena lanja ny lafiny fitandroana ny ain’ny mpijery baolina, nandraisana fepetra manokana. Hialana amin’ny fifanosehana eo am-pidirana sy eo am-pivoahana izany mba tsy hiverenan’ny tranga nahafatesana olona, nandritra ny lalaon’ny Barea sy i Sénégal, ny taona 2018.
Nanotrona ny ben’ny Tanàna Naina
Marihina fa niara-dalana tamin’ny filoham-pirenena ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, Andriantsitohaina Naina, noho ny maha fananan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny Kianja Barea. Teo koa ny minisitry ny Fanatanjahantena ary ny minisitry ny Fiarovam-pirenena. Notsiahivina fa miisa enina ireo vavahady fidirana amin’ny kianja vaovao ary 28 kosa ny tohatohatra fidirana eny amin’ny «gradins», ankoatra ireo ny fidirana natokana ho an’ny manam-pahefana sy ny vahiny manan-kaja. Hahatratra 50 ny trano fivoahana. Marihina fa hisy toerana fiantsonan’ny fiara «parking» mahazaka fiara 115 sy toerana fametrahana bus goavana miisa efatra ny Kianja Barea. Toy ireo kianja goavana any ivelany, hisy koa toeram-pivarotana maro, hahitana akanjo sy lamaody ary taozavatra malagasy ao ambanin’ny «tribune». Bozaka “hybride”, nohafarana manokana ny handrakotra ny toerana hilalaovana, hisy fanondrahana mandeha ho azy. Nohamafisin’ny filoha Rajoelina, tamin’ireo tomponandraikitry ny orinasa, ny hanaovana ny kianja hanara-penitra satria hipetraka ho tantara ary holovain’ireo taranaka faramandimby.